Exynos 9609: Nhazi usoro ohuru nke Samsung | Gam akporosis
Exynos 9609: Samsung onye nhazi ohuru
Izu a ka egosiri Motorola One Vision na eze. Ọ bụ ọgbọ nke abụọ nke ekwentị jiri ụdị gam akporo. Ekwentị nke tụrụ gị n'anya site na iji Samsung processor, ịbụ Exynos 9609 onye ahọpụtara. Nke a bụ ihe bịara dị ịtụnanya, maka na ọ bụghị usoro nhazi ama ama. N'ezie, echere ya na onye nhazi ekwentị ahụ bụ Exynos 9610, mana enwere ederede.
Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ na ọ bụghị usoro ndebanye aha. Exynos 9609 bụ ihe nhazi ọhụụ, nke nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na 9610. Anyị nwere ike ịhụ ya dị ka ụdị nwetụrụ karịa nke processor kwuru. Ihe mgbawa ọhụụ maka Samsung site na Samsung.
N'ezie, ọnwa ndị a enwere ọhụụ banyere Motorola One Vision, ebe ahuru Exynos 9610 ka onye nhazi ya. Ọ bụ ezie na eziokwu bụ na ha bụ ndị nhazi abụọ nwere ọtụtụ ihe jikọrọ. Ọ bụ ezie na Samsung webatara usoro mgbanwe na ya, si otú a na-eme ka mgbawa ahụ dị ọhụrụ ma gbanwee ya maka ekwentị ọhụrụ.
Exynos 7 7904: Ihe nhazi Samsung ohuru maka etiti
Exynos 9609 Nkọwapụta
Anyị na-ahụ ọzọ processor na arụpụtara ya na usoro 10 nanometer. Ekwesịrị ịtọhapụ Exynos 9609 maka ekwentị, ma e wezụga Motorola One Vision. Ọ bụ ezie na o yikarịrị ka ọnwa ndị a ọhụụ ọhụụ sitere na Samsung n'onwe ya ga-abata nke ga-eji ya. Nkọwa ya dị ka ndị a:
LTE Cat. 12 3CA 600Mbps (DL)
Cat. 13 2CA 150Mbps (UL)
Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Radio FM
Abụọ: 16 + 16MP
4K UHD 60fps na HEVC (H.265), H.264, VP9 codecs
Na ihe nhazi ohuru a, Samsung choro ka o tinye uzo ozo. Ya mere, akara Korea na-ere ya dị ka ihe nhazi maka ọtụtụ puku afọ. Nke a bụ ihe na - eme ka ị chee na anyị nwere ike ịhụ ya ebe ọ bụla ekwentị ọhụrụ n'ime nso nke Galaxy M. Ebe ọ bụ na a mara ọkwa ekwentị dị iche iche n'oge niile dịka otu ezubere maka ndị na-ege ntị.
Ọ ga-adọrọ mmasị ịhụ kedu ekwentị ga-eji Exynos 9609 a n’ọnwa ole na ole sochirinụ. N'ezie, n'oge na-adịghị anya, anyị ga-anụ akụkọ banyere ekwentị Samsung. Anyị ga-ege ntị na akụkọ gbasara nke a. Nwere ike ịbụ Galaxy M40, nke mmeghe ya yiri ka ọ na-abịarukwu nso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Exynos 9609: Samsung onye nhazi ohuru
Sony Xperia 1 nwere ụbọchị ọhụụ
OPPO A9X: Ulo ohuru ohuru bu akara